Muxuu yahay jijimado caqli badan oo la iibsado si loo bixiyo xilliga kirismaska ​​| War gadget
Waa maxay jijin caqli badan oo la iibsado si loo bixiyo xilliga kirismaska
Kirismaska ​​ayaa soo socda. Hadaad u malaynaysid in la gaadhay wakhtigii Jooji inaad siiso sharaabaadyo, xarigyo, colognes iyo nigis Guud ahaan, waxay had iyo jeer na siinayaan oo aan siino waqtigan oo kale sanadka, jijin tiris ah ayaa noqon karta ikhtiyaar aad u fiican in la tixgeliyo.
Ugu horreyntii, waa inaan si cad u qeexnaa farqiga u dhexeeya jijin qiimayn ah iyo saacadda casriga ah. In kasta oo xargaha gacmaha loogu talagalay loogu talagalay inay kormeeraan hawl maalmeedkeenna maalin kasta oo aan lahayn wax badan oo iska yeelyeel ah, in kasta oo ay jiraan qaabab aad u dhammaystiran, haddana smartwatches ayaa sameeya isla laakiin oo leh astaamo dheeri ah, shaashad badan iyo qiime sare.
Shaashadda weyn ee smartwatches waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku shaqeyso qaar ka mid ah codsiyada qalabka laftiisa, marka lagu daro ka jawaabista wicitaannada iyo farriimaha ka imanaya barnaamijyada farriimaha ee la isticmaalay. Dheeraad ah, ku dar GPS sidaa darteed waxay noo oggolaadeen inaan la soconno dhaqdhaqaaqayaga isboorti ee bannaanka.
Xaddidaadda kale ee smartwatches waa nolosha batteriga, taas oo inta badan aan ka badnayn 24 saacadood. Tani waxay sabab u tahay, hal dhinac, xaqiiqda ah in shaashadaha qalabkan badankood ay dhexgalaan shaashadda OLED halkaas oo nooc kasta oo sawirro ah, qoraallo dhaadheer iyo kuwa kaleba lagu soo bandhigi karo. Sababta kale ayaa ah isticmaalka joogtada ah ee GPS.
Si loo dhammeeyo isbarbardhigga si aad u kala caddeyso oo aad dhaqso ugu kala soocdo jijin tiris iyo saacadda casriga, waa inaan eegnaa qiimaha. Halka jijimooyinka cabiraya howlaheena isboorti waan heli karnaa laga bilaabo 30 euro, smartwatches wanaagsan (ma aha garaacista Shiinaha) waxay ka bilaabaan ugu fiican 100 euro.
2 Sharaf Bandid 5
4 Fitbit Dhiirrigelinta HR
In kasta oo ay tahay noocaasi ugu caansan suuqa, Waxaan go'aansaday inaan dhigo booska koowaad tan iyo markii aan uqaadaneyno tixraac laxiriirta moodooyinka intiisa kale ee aan kugula talin doono qodobkaan.
Qarniga afraad ee Mi Band 4 ugu dambeyntii korsado a bandhig midab iyo timo ka weyn kuwii ka horeeyay, gaar ahaan 0,95 inji. Waxay noo ogolaaneysaa inaan helno ogeysiisyada labada fariimood iyo wicitaanada aan helno, laakiin anaga oo aan mideyneyn makarafoon, kama jawaabi karno wicitaanada ama fariimaha.
Sida laga soo xigtay soo saaraha, baytariga Mi Band 4 wuxuu gaaraa 20 maalmood, in kastoo runti kama badna 2 toddobaad. Ma haysato qalab GPS ah, oo ah wax caan ku ah tirinta jijimadaha qiimahooda iyo batteriga ay u baahan yihiin awgood.
Kaliya maahan kormeerka dhaqdhaqaaqa jirkeena maalinba maalinta ka dambeysa sida masaafada aan soo marnay, talaabooyinka, kalooriyada aan gubnay ... laakiin sidoo kale la soco heerka garaaca wadnaheena Codsiga isticmaalaha si otomaatig ah uma ahan sida tira-koobyada kale sameeyaan.
Dhammaan xogta waxaa lagu duubay barnaamijka Mi Fit, codsi ku habboon labada macruufka iyo Android. Tuur Shahaadada IP68 waana quusin karaa ilaa mitirka 50.
Qaabka aan ka heli karno Yurub iyo Latin Amerika labaduba waa tusaalaha aan lahayn NFC chip markaa uma isticmaali karno inaan lacag kaga bixinno jijinteena.
Xiaomi Mi Band 4 waxaa lagu qiimeeyaa Amazon of 32,99 euros.
Sharaf Bandid 5
Xulashada labaad ee ugu fiican ee aan ku haysanno suuqa ayaa ka timid gacanta Hauwei oo leh Sharaf Bandid 5. Jijimadan ayaa waxyar ka jaban Xiaomi Mi Band 4 iyo waxay na siisaa ficil ahaan isla faa'iidooyinka, oo ay ku jiraan shaashadda OLED ee 0,95-inji ah.
Si kastaba ha noqotee, waxaan helnaa kala duwanaansho muhiim ah oo ka ciyaari kara labadaba dhinacaaga iyo adiga, sida is-xukunka oo ah 4 illaa 5 maalmood iyo cabirka heerka ogsijiinta, Muuqaal ah in taleefannada casriga ah ee Samsung-ka sare ay soo bandhigeen dhowr sano ka hor, laakiin la waayay.
Sida Mi Band 4, ma laha qalab GPS, sidaa darteed waxaan ubaahanahay taleefankeena casriga si aan ula socono dariiqa bannaanka markaan u soconno orod, baaskiil ama socod uun. Sidoo kale nama ogolaanayo inaan wax ku bixinno NFC maadaama ay ka maqan tahay lacagtan.
Kooxda Honor Band 5 ayaa loo heli karaa 32,99 euros on Amazon.
Samsung ayaa sidoo kale suuqa u gashay tirinta xadhkaha curcurka iyada oo loo marayo Galaxy Fit e, jijin la shaashad madow iyo caddaan ah. Qaabkani wuxuu noo ogolaanayaa inaan si otomaatig ah u qiyaasno dhammaan howlahayaga isboorti oo ay ku jiraan garaaca wadnaha, tallaabooyinka, wareegyada hurdada ...
Faa'iidada ugu weyn ee ay ka leedahay inta ka hartay moodooyinka Xiaomi iyo Honor ayaa ah inay u adkeysato boodhka, biyaha iyo naxdinta labadaba. marka loo eego heerarka militariga. Ma laha qalab GPS ah oo loola socdo dhaqdhaqaaqa jireed ama NFC.
Batariga wuxuu gaaraa 4-5 maalmood oo ismaamul ah iyo macluumaadka qalabkani diwaan gashan yahay waxaa laga heli karaa barnaamijka caafimaadka ee Samsung, mid ka mid ah codsiyada ugu fiican ogolaansho ka haysta Garmin.
Samsung Galaxy Fit 3 waa lagu qiimeeyaa 29 euro at Amazon.
Fitbit Dhiirrigelinta HR
Fitbit waa mid ka mid ah halyeeyada adduunka ee qiyaasaha jijimooyinka. In kasta oo ay run tahay inaysan si sax ah u jabanayn, tayada qalabka iyo macluumaadka ay na siinayaan Kama heli doonno labadaba moodooyinka Xiaomi iyo Honor.
La Fitbit Dhiirrigelinta HR wuxuu na siiyaa ismaamul 5 maalmood oo buuxa, xilliyo kormeer ah garaaca wadnaha sida talaabooyinka, masaafada la socda, daqiiqado waxqabad. Waxay awood u leedahay inay si toos ah u ogaato nooca isboortiga aan sameyneyno si aan ula socono.
Ma laha qalab GPS, sidaa darteed ma awoodo inay la socoto jimicsiga banaanka iyadoo aan la isticmaalin casriga casriga ah. Sida Mi Band 4, waxay na siisaa xulashooyin habeyn kala duwan markaad isticmaaleyso xargaha midabada kala duwan.
Fitbit Inspire HR ayaa lagu qiimeeyaa 79,90 euro at Amazon
Garmin wuxuu lamid yahay tayada iyo cimri dhererka markay tahay tirinta aaladaha. The Gamin Vivosport waa mid ka mid ah jijimooyinka tirada yar ee tirinaya wuxuu leeyahay qalab GPS ah si loola socdo dhaqdhaqaaqayaga jimicsiga bannaanka, markaa waxay ku habboon tahay cayaaraha jecel, maadaama aysan muhiim ahayn in lala baxo mobilada.
Qalabka GPS wuxuu mas'uul ka yahay duubista labada waddo ee ay markii dambe ka soo saarto masaafada safarka iyo celceliska xawaaraha iyada oo loo marayo codsiyada cajiibka ah ee ay noo saareyso, mid ka mid ah kuwa ugu fiican suuqa.
Sida jijin wanaagsan oo la qiimeeyo, waxay sidoo kale na ogeysiisaa kalooriyada aan gubno, waxay kormeertaa hurdadayada sidoo kale waxay na siisaa macluumaad ku saabsan xaddiga ogsijiinta ku jirta dhiigga.
Garmin Vivosport ayaa lagu qiimeeyaa 101,99 euro at Amazon
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » qalabka » Qalabka la gashan karo » Waa maxay jijin caqli badan oo la iibsado si loo bixiyo xilliga kirismaska
3rd Gen Amazon Echo, Waxaan Dib U Eegi Doonnaa Echo Cusub Oo Weyn
Hadlayaal caqli badan oo la siinayo Kirismaska